China Baby Ihi ụra akpa ụlọ ọrụ na-emepụta | Senlai
1. companylọ ọrụ anyị na-arụpụta akpa ụra. Ebe kachasị mma ire akpa ụra bụ Europe na North America.
2. Akpa ụra na-agbaso akwa na-agbanwe agbanwe na usoro na-agbanwe agbanwe. Canmụaka nwere ike zuru ike na akpa ụra. Emere akpa ụra ka eji ubu gbochie ụmụaka ibute oyi. Ugboro abụọ zipa imewe, abụọ n'akụkụ zippers maka mfe na na anya. E nwere eriri nrapado n'azụ akpa ihi ụra, nke nwere ikuku ikuku zuru oke. Ihe mkpuchi dị n’elu mmiri na-egbochi mmiri na ikuku mmiri, akwa dị n’ime bụ plush, etiti ya bụ akwa. Ọ dị ọkụ ma ghara ịtụ egwu oyi na ifufe oyi.
3. E nwere ọtụtụ akpa ihi ụra na ụlọ ọrụ anyị, gụnyere nke dị mkpa, nke gbara ọkpụrụkpụ, ala, enweghị ala, mkpọchi otu akụkụ, mkpọchi ihu abụọ, ala, velvet, akwa olu na-enweghị ntutu isi, akwa olu ajị agba, gbọmgbọm, gbọmgbọm square, mmechi snap. , Velcro mmechi. Enwere ike itinye ụfọdụ akpa ihi ụra na stroller.
4. Akpa ụra nwere nnukwu ohere ma nwee ike iji ya dị ka blanket na akwa. Mgbe ị na-ahọrọ akpa ihi ụra, ị nwere ike ịhọrọ dịka ogo nwa gị dị. Ogologo akpa ihi ụra kwesịrị ịkarị ogologo nwa ahụ, na oke akpa ụra ga-ebu ibu karịa isi nwata ahụ. Ọ bụrụ na nha pere mpe, enweghị ohere maka ụmụaka ịkwaga n'ime akpa ụra. Ma n'otu oge ahụ, nha ahụ ekwesịghị ịdị oke oke, nnukwu ihi ụra buru ibu agaghị enwe mmetụta ọ bụla, enweghị ike ịrụ ọrụ nke ikuku na ọkụ.
5. Ngwaahịa anyị dabara na asambodo Oeko tex 100 larịị 1. The factory nditịm akara àgwà nke ogbe ngwaahịa na ana achi achi na ákwà àgwà site knitit, dyeing na ndị ọzọ na Filiks. Ngwaahịa anyị nwere ezigbo aka, ma zute azo na fumalin na-enweghị akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ na-acha akwụkwọ ndụ.
Nke gara aga: Nwa smock
Osote: Pmụaka PU Raincoat
Baby Pu Ihi ụra Bag
Baby Waterproof Ihi ụra Bag
Baby Windproof Ihi ụra Bag